‘तवस्विनी’ महाकाब्य सार्वजनिक :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
‘तवस्विनी’ महाकाब्य सार्वजनिक
१७ फागुन, काठमाडौँ । मोफसलका चर्चित साहित्यकार अजम्बरध्वज खातीको ‘तवस्विनी’ महाकाब्य बुधवार लोकार्पण भएको छ । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले महाकाब्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बुटवलमा बसेर साहित्य सिर्जनामा लागेका खातीको ‘तवस्विनी’ दशौँ कृति हो । यसअघि उनका माइली, उद्वोधन खण्डकाब्य, आँशु बेनीको, पाइलाका डोबहरु, खरानी गंगा गीतिकाब्य लगायतका कृति सार्वजनिक भएका छन् ।
महाकाब्य लोकापर्ण गर्दे राष्ट्रकवि घिमिरेले आफ्ना कविताहरुलाई आफ्नै बच्चाजस्तै मायाँ गर्नै खातीको महाकाब्य विश्वस्तरीय सिर्जना भएको बताए । नेपालका सुन्दर चेलीबेटीहरु बेचिएको, उनीहरुले भोगेका सङघर्ष र दुखहरु, देशमा फर्किआउदा पनि पाएका विस्मयहरुहरुलाइ कवि अत्यन्तै मार्मिक र कारुणिक रुपमा चित्रण गरेको घिमिरेले उल्लेख गरे । कवि खातीको शैली अत्यन्त सरल रहेको भन्दै कवि घिमिरेले उनले कहीँ खाँटी ठेट शब्द लेख्ने र कहीँ टपक्कै टिपुँ जस्ता गीत गाउने र कहिलेजन्तरमा राखुँ जस्ता जीवनदायी सूक्ति बनाउने शैली अनुपम भएको उल्लेख गरे । ‘तवस्विनी’ लोकभाकामा लेखिएको उत्कृष्ट सिर्जना भएको टिप्पणी गर्दे राष्ट्रकवि घिमिरेले कोइली जहाँ बासेपनि मिठो भएजस्तै खातीले जहा बसेर लेखेको भएपनि मिठो सिर्जना पस्केको बताए । खातीसँग पचास बर्षअघि पाल्पामा भएको भेट सम्झेर भावुक हुँदै कवि घिमिरेले ‘तवस्विनी’ खास नेपाली पाराको कृति भएको उल्लेख गरे ।
महाकाव्यको टिप्पणी गर्दै समालोचक साहित्यकार गर्दै मोदनाथ प्रश्रीतले ‘तवस्विनी’ प्रकृति, समाज, दुखपीडा, सामाजिक भावनाको वर्णनमा उत्कृष्ट कृति रहेको बताए । कवि खाती उमेरले बुढो भएपपनि कृती लेखनमा अत्यन्तै भिजेको र तन्नेरीनै पाएको उनले उल्लेख गरे । नेपाली महाकाव्य लेखनको पहिलो सर्ग मङगलाचरणमा भगवानको प्रार्थना र प्रसंसा गर्ने प्रयोगलाइ छाडी खातीले जीवनको सत्प्रेरकको बयान गर्दे नयाँ प्रयोग गरेको उल्लेख गरे ।
महाकाव्य विमोचन समारोहमा सर्जक खातीले महाकाव्यका चरित्रले पाएको दुख बयान गर्दा आफू धेरै पटक रोएको बताए । लामो साधनापछि झ्याउरे भाकामा ‘तवस्विनी’ जन्मिएको सुनाउदै उनले एक नेपाली नारीको वेदना र सङघर्षलाइ कृतिमा उतारिएको बताए । कार्यक्रममा साहित्यकार तथा प्राध्यापक डा. महादेव अवस्थीले तपस्विनी महाकाव्य सरलताबाट श्रेष्ठता हासिल गरेको सङग्रहका रुपमा आएको बताए ।
2 Comments on “‘तवस्विनी’ महाकाब्य सार्वजनिक”
Dipsan shah wrote on 28 February, 2013, 14:06
Nepal Ko bahu Charchit jhyaure bhaka ma rachiye Ko yo mahakavya le Nepal ma jhyaure bhaka jiudai rahe6 bhanne kura ma antantai khusi lageko6ra khati jee Lai muri muri badhai ka sathai dhanyebad
पशुपति आचार्य wrote on4March, 2013, 14:59
सहित्याकर तथा कवि अजम्बरध्वज खाती बुबालाई बधाई. बुटवलमा सधै सुनिने कविताका माझ आएको महाकाव्य पनि पढ्न पाईने भयो. खुसी लाग्यो.
वैदेशिक रोजगारीमा ‘टुरिष्ट’का दिन सकिए